गृहमन्त्री थापाबाट गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक पुरस्कृत - Everest Dainik - News from Nepal
गृहमन्त्री थापाबाट गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक पुरस्कृत
काठमाडौँ, वैशाख ५ । बेरुजु फछ्र्यौटमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा सचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा बिहीबार एक कार्यक्रमकाबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले उनीहरुलाई नगद तथा प्रशंसापत्र प्रदान गरेका हुन् ।
बेरुजु फछ्र्यौटमा उत्कृष्ट भएकोमा गृह मन्त्रालयमा सचिव राई, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक खनाललाई रु. आठ हजार नगद एवम् प्रशंसापत्र तथा गृह मन्त्रालयमा उपसचिव शिवनाथ पौडेल, लेखा अधिकृतहरु फइन्द्रकुमार श्रेष्ठ, शालिकराम पराजुली, लेखापाल नरबहादुर कुँवरलाई नगद रु ६ हजार तथा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले पुरस्कृत व्यक्तित्वहरुलाई बधाई दिँदै भविष्यमा समेत थप उत्कृष्ट कार्य गर्न आग्रह गरे । आजको कार्यक्रमले अन्य मन्त्रालयलाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्ने उनको भनाई छ । सरकारले विकास र समृद्धिको लक्ष्य लिएको र त्यसका लागि सुशासन अनिवार्य रहेकोमा गृहमन्त्रीले जोड दिए ।
गृह मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायहरुको आ.व.२०७३÷७४सम्मको आ.व. २०७४÷७५मा फछ्र्यौट गरीसक्नुपर्ने सो अवधिमा ६३.०३ प्रतिशत अर्थात रकम रु चार अर्ब ३० करोड ९७ लाख रहेकोमा रु दुई अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बेरुजु फछ्योट भएको छ । यस्तै नेपाल प्रहरीको आ.व.२०७३÷७४सम्मको बेरुजु रु ६८ करोड ४१ लाख मध्ये ८५.१४ प्रतिशत अर्थात ५८ करोड २५ लाख बेरुजु फछ्र्यौट भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सरकारलाई असफल बनाउन विभिन्न षडयन्त्र हुँदैछन् : गृहमन्त्री थापा